Xog Cusub Oo Laga Helay Wararka Barcelona La Xidhiidhinaya Saxeexa Cristiano Ronaldo & Haddii Lionel Messi Lala Midaynayo - Gool24.Net
Xog Cusub Oo Laga Helay Wararka Barcelona La Xidhiidhinaya Saxeexa Cristiano Ronaldo & Haddii Lionel Messi Lala Midaynayo
Saxafiga ree Spain ee Guillem Balague ayaa dhawaan sheegay in kooxda Juventus ay ka go’antahay inay gabi ahaanba iska dirto weeraryahanka kooxdeeda ee Cristiano Ronaldo oo ay ku dhib qabaan 28-ka Milyan ee Pound ee uu mushaharka u qaato.
Sida ay wararku sheegayaan Juventus ayaa Ronaldo saxeexiisa u bandhigtay qaar kamida kooxaha waaweyn ee Yurub oo ay kamid tahay Barcelona taas oo kor u qaaday riyada ah inay iska garab ciyaaraan Lionel Messi.
Laakiin wargeyska AS ee Madrid kasoo baxa ayaa biyo qabaw ku shubay wararkaas maadaama oo uu soo xigtay wakiilada Ronaldo oo wararka sheegaya in Juventus fasaxayso Ronaldo ku sifaynaya “war gabi ahaanba been ah”
Wargeyska AS ayaa intaas ku daraya in Ronaldo uu ku faraxsan yahay Bianconeri oo uusan u wareegayn Barcelona amaba koox kale oo Yurub ah.
35 sano jirkan oo laba xilli ciyaareed kusoo qaatay Juventus ayuu heshiiskiisa Allianz Stadium yahay mid dhacaya sanadka 2022 balse shaqsiyaadka ku dhaw dhaw ayaa xusay inuu doonayo inuu baaqi kusii ahaado Turin oo uu halkaas Champions League ku raadiyo markiisii lixaad.
Dhawaan ayay ahayd markii sidoo kale Ronaldo lala xidhiidhiyay kooxda caasimada France ee Paris Saint-Germain iyadoo la sheegayay inuu doonayo inuu la midoobo Neymar JR iyo Kylian Mbappe.
Juventus ayaa xilli ciyaareedkan kusoo guuleysatay horyaal kale oo Serie A ah oo uu shaqo badan kasoo qabtay Ronaldo balse hammigoodii Champions League ayaa kusoo dhammaaday wareega 16-ka gaar ahaan gacmaha kooxda Lyon.